BGR - - Tele relay က $ 100 DUO60 လက်ငင်း Pot ထိုနေ့၏ပထမဦးဆုံးကတည်းက၎င်း၏နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာဖြစ်ပါတယ်
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ BGR - "အဆိုပါ $ 100 DUO60 လက်ငင်း Pot ထိုနေ့၏ပထမဦးဆုံးကတည်းက၎င်း၏နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာဖြစ်ပါတယ်
BGR - အဆိုပါ $ 100 DUO60 လက်ငင်း Pot ထိုနေ့၏ပထမဦးဆုံးကတည်းက၎င်း၏နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းမှာဖြစ်ပါတယ်
သင်ကအရမ်းလူကြိုက်များလွဲချော်ခဲ့လျှင် [606အတွက်] လက်ငင်း Pot DUO7 Multi-ရည်ရွယ်ချက်သည် Programmable ဖိအား cooker 1 1 အမေဇုံ၏ပထမဦးဆုံးနေ့၏အကြီးမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုစဉ်အတွင်း, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကောင်းသတင်းရှိသည်။ မှန်ပါသည်, ထုတ်ကုန်ပြန်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းနီးစပ်ပါ! မြန်မြန်သင်အဆက်မပြတ်အသုံးပြုတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့တစ်ခုတည်းသော $ 100, အဘို့ဤအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Multi-ရည်ရွယ်ချက်မီးဖိုလက်ငင်း Pot $ 59 ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မြန်မြန်!
SIZE အကျော်ကြားဆုံး: အစားအစာများနေ့စဉ်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော, အများဆုံးကလူ6ရန်။
7 ပစ္စည်းများ: ဖိအား cooker, ဖိအား cooker, ဆန် cooker, မီးသင်္ဘော, ခုန်တက်, ဒိန်ချဉ်နဲ့ပူဟင်းလျာများ: အပါအဝင်အာကာသကယ်ဖို့တ7မီးဖိုချောင်ကရိယာပေါင်းစပ်။
constant ရလဒ်: စောင့်ကြည့်ဖိအား, အပူချိန်, ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောရလဒ်များကိုအခါတိုင်းအောင်မြင်ရန်ပြင်းထန်မှုနှင့်အပူများ၏ကြာချိန်ညှိ။
ရောင်းအကောင်းဆုံး MODEL: အပူချိန်, ဖိအားစောင့်ကြည့်, ကြာချိန်ထိန်းသိမ်းနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောရလာဒ်များအောင်မြင်ရန်ပြင်းထန်မှုနှင့်အပူများ၏ကြာချိန်ညှိ။ ပိုမိုမြန်ဆန်% 70 ရန်သင့်ဟင်းလျာများပြင်ဆင်ပါ။
ပန်းကန်ဆေးစက်-လုံခြုံလက်ဗွေ, အစိတ်အပိုင်းများကိုများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုခံနိုင်ရည်သံမဏိအဖုံး: အောက်ဆုံး3နှင့်အတူဒယ်အိုးပင်ချက်ပြုတ်ဘို့ခြံ, လက်ကိုင်နှင့်အတူရေနွေးငွေ့ထိန်သိမ်း, ဇွန်း, ဟင်းချိုဇွန်းနှင့်တိုင်းတာခြင်းခွက်ကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်သည်စင်ကြယ်ရန်လွယ်ကူ။
လုံခြုံမှု: စိတ်ကပိုငြိမ်းချမ်းရေးများအတွက် 10 လုံခြုံရေးယန္တယား, အနံ့ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ automatic ချက်ပြုတ်နှင့်အတူစွမ်းအင်ထိရောက်နှင့် ul / ULC ။
120V ထောက်ပံ့ရေး - 60Hz - ဆိုမြောက်အမေရိကလျှင်, သင်၏သွေးဖိအားကိုစစ်ဆေးပါ။
BGR - $ 40 ရောင်းခံရဖို့သိပ်ကောင်းသောအသံကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ Anker နားကြပ်မအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်